Jwxo-shiil, oo Xusuus La,aan Darteed Waraysi Bixin Waayey! – Rasaasa News
Oct 23, 2011 aan, Darteed Waraysi Bixin Waayey, Jwxo-shiil, oo Xusuus La
London, Oct 22, 2011 [ras] – War hoose oo aan ka soo xiganay laba saxaafadood oo ka mid saxaafadaha Somalida oo ah TV iyo Ideecad caalami ah, ayaa noo sheegay in ay waraysi ka qabteen Jwxo-shiil, ka dibna ay baabi,iyeen waraysigii, kolkii ay arkeen in uusan caadi ahayn.
Afada ayaa u sheegtay labada saxaafadoodba in uusan Duqu fiicnayn oo uusan siin karin waraysi, laakiin kolkii uu isagu la hadlay ayey dheheen wuu bixin karaa waraysi.
TV. SomaliChanel oo hore u siidayn jiray waraysiyada Jwxo-shiil iyo xubnaha kooxdiisa, dhawaana joojiyey barnaamijyo ay kooxda u siidayn jirtay, sabab lacag la,aan awgeed, ayaa Jwxo-shiil ugu tagay gurigiisa si ay waraysi uga qabto.
TV, ayaa loo sheegay in Jwxo-shiil, uusan waraysi bixin karin, laakiin Jwxo-shiil, ayaa yidhi waan bixin karaa. Wariyaha ayaa dib u tirtiray muuqaaladii iyo su,aalihii uu waydiiyey ka dib kolkii uu wax is dhax dhigay Jwxo-shiil.
Waxaa iyana sidaas si la mid ah ay ku dhacday Ideecad VOA, oo kolkii ay ka yaabtay joojisay waraysi ay ka duubtay.
Jwxo-shiil, oo jidh ahaan iyo muuqaal ahaanba u eg ruux caafimaad qaba ayaa waxaa la soo daristay dhibaato xaga maskaxda ah, taas oo ah dhinaca xusuusta.
Kolka la waydiiyo Su,aal isla su,aashi ayuu dib kuugu soo celin dhawr goor isaga oo aan wax jawaab ah bixin sida la sheegay ama wuxuu kugu celcelin iigu soo celi su,aasha.
Jwxo-shiil, ayaan mudo ka soo bixin guriga, cabsi badan iyo walwal la dartiis taas loo sababeeyey in uu ku dhacdo xanuunka asiibay qaybta xusuusta ee maskaxda.
Waxay inta badan Afadu kula kalahdaa Isbitaal ku shaqo leh xaga dhimirka oo u sameeya tababar xusuusta ah, waxaa kale oo uu qaataa dawooyinka biiriya xusuusta.
Waxaada ilaalinta dadka waaweyn iyo dadka xanuunsan ee Ingriiska, ayaa u qabatay gaari guriga ka qaada kuna soo celiya, maalmaha la gaynayo Isbitaalka.